रेखा थापाको फाउन्डेसन कहाँ पुगेर चुक्यो ? – Dainiki Sarokar
रेखा थापाको फाउन्डेसन कहाँ पुगेर चुक्यो ?
२०७७ फाल्गुन २१, शुक्रबार ०४:४८
काठमाडौँ । ‘लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ’ यो नेपाली उखानले पुनः एकपटक चलचित्र वृत्तलाई चरितार्थ गरेको छ । नायिका सुष्मा कार्कीमाथि आक्रमण भयो ।
यसैबीच एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले ‘मागेर समाजसेवा हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइन् । यस विषयमा स्रोता/दर्शक दुई भागमा विभाजित भए । यहीबीच अर्कि नायिका रेखा थापाको अन्तरवार्ताको एक भिडिओ क्लिप भाइरल भयो । भिडियोमा नायिका थापाले समेत सोही आसयको कुरा गरेकी छन् । ‘मागेर समाज सेवा हुँदैन,’ नायिका थापाले भिडियोमा भनेकी छन्, ‘जति गरेँ मैले आफ्नै पकेटबाट गरेँ । समाजसेवा गर्ने नै हो भने, तपाईँ सम्पन्न हुनुपर्‍यो । तपाईँसँग एक लाख रुपैयाँ मागेर समाजसेवा गर्ने हो भने त्यो त ’डिस्ट्रिब्यूटर’ भयो नि । म त डिस्ट्रिब्यूटर भएँ नि । डिस्ट्रिब्यूटर कसरी समाज सेवा भयो र ? त्यसकारण मैले जति गरेँ आजसम्म, मेरो पकेटबाट गरेँ । अब जुन योजना बनाइरहेको छु, त्यो योजनामा पैसा लाग्दैन । मैले एकजनालाई मात्रै सुधार्न सकेँ भने त्यो नै मेरो ठूलो सम्पति ।’
यद्यपि उक्त भिडियाे क्लिप भने केही पुरानो हो ।
सामाजिक सञ्जालमा भएको विरोधले अहिले केही फरक रूप लिएको छ । रेखा थापा फाउन्डेसन खोलेर समाज सेवामा लागेकी रेखालाई उनका पूर्व म्यानेजरसमेत रहेका पुष्कर भट्टले प्रश्न उठाएका छन् ।
रेखाले २०७० साल पुस १९ गते शुक्रबार भव्य कार्यक्रम गर्दै ‘रेखा थापा फाउन्डेसन’ शुरु भएको घोषणा गरेकी थिइन् । नाम चलेको तारे होटेलमा गरिएको उक्त कार्यक्रममा चलेका कलाकार र पत्रकारहरुको समेत सहभागिता थियो । सोही दिनबाट उनले फाउन्डेसनको अफिसियल वेबसाइटसमेत शुरु गरेकी छन् । उक्त कार्यक्रममा सुर्खेत र डडेल्धुरा जिल्लाको जोगबुढामा रहेका लोपोन्मुख राउटे जातिलाई गरेको सहयोगसम्बन्धी वृत्तचित्र प्रदर्शनसमेत भएको थियो । फाउन्डेसनको उद्घाटनका लागि उनले दुई राउटे लिडरलाई नै छानिन् । एक परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ सहयोगसमेत गरिन् ।
कार्यक्रममा उनले २०० वटा घर सुर्खेतमा राउटेलाई बनाइदिने घोषणासमेत गरकी थिइन् । त्यस्तै उनले सुदूरमै रहँदा एक रेडियो अन्तरवार्तामा चारजना राउटेको बच्चा लिएर काठमाडौं जाने र उतै शिक्षाको व्यवस्था गरेको समेत बताएकी थिइन् ।
उनको चलचित्र ‘हिम्मतवाली’ चर्चामा थियो । प्रदर्शनको समय नजिकिँदै थियो । चलचित्रको लागि समेत उनले गाउँबाट राउटे नै झिकाइन् । यसै पनि दुवै हात नभएर पनि सगरमाथा आरोहण गरेका साहसी आराेही सुदर्शन गौतमलाई लिएर बनाएकाे चलचित्र, अझ राउटेको उपस्थितिले रेखाको चर्चा चुलियो । चलचित्र चल्यो पनि ।
फाउन्डेसन उद्घाटनको क्रममा उनले चलचित्र क्षेत्रमा नै कार्यरत पुष्कर भट्टलाई फाउन्डेसनको म्यानेजर भनेर उद्घोष गरेकी थिइन् । उनै पुष्कर, जसले अहिले आएर रेखा माथि प्रश्न गरिरहेका छन् । सोही विषयमा जिज्ञासा राख्दा पुष्करले आफूलाई पद दिइएको तर, फाउन्डेसनको अफिस भनेर केही व्यवस्था नभएको बताए । काम केही आउँदा रेखाले भेट्न बोलाउने भए पनि अनाउन्स्मेन्टपश्चात् खासै कुरा नभएको पुष्कर सुनाउँछन् ।
यसको केही महिनापश्चात् भूकम्प आयो । भूकम्पले तहसनहस पारेको जीवन सम्हाल्न उनी क्यानडा गए ।
पुष्पकरका अनुसार रेखाले अनाउन्स् गर्दा घर बनाउने कुरा गरेको भिडियो अडियो प्रमाण जति पनि पाउन सकिन्छ’ भन्ने उनले राउटेका तीनजना बच्चा भने आफ्नै रोहबरमा ल्याएका रहेछन् । पहाड घर डडेल्धुरा भएका भट्टकै पहलमा पहिलोपटक रेखा राउटे बस्ती पुगेकी थिइन् । भट्टकै रोहबरमा बच्चालाई ल्याएर स्वयम्भूको आनन्दकुटी विद्यापीठमा भर्ना गरिएको थियो ।
भर्ना गर्दा विद्यालयमा केही रकम जम्मासमेत गरिएको थियो । बालबालिकाको संरक्षकमा आमा रेखा थापा, बाबु सुदर्शन गौतम र सहयोगीमा भट्टको नाम थियो । तर, केही महिना नबित्दै रेखाले भट्टलाई भेट्न बोलाएर ती बच्चाहरू घर फर्काइदिन आग्रह गरिन् । आफ्नै जिम्मामा सम्झाई–बुझाई गरेर बल्ल काठमाडौं पठाउन मनाएका राउटे अभिवाकलाई अचानक बालबालिका जिम्मा लगाउन सहज थिएन ।
राउटेको परिवारबाट पैसा मागेर मानसिक तनाव दिएको रेखाले बताउँदा, भट्ट अन्ततः प्रहरीको रोहबरमा राउटे बस्ती पुगे । बस्तीमा पुगेर प्रहरीसमक्ष नै उनले बालबालिका जिम्मा लिए । र एक शैक्षिक सत्र समेत पूरा नहुँदै ठूल्ठूला सपना बुनेर ल्याइएका बालबालिका उतै फर्किन विवश भए ।
क्यानडाबाट पैसा ल्याएर रेखाले सहयोग गरेकी हुन् त ? भन्ने प्रश्नमा पुष्कर भन्छन्, ‘फन्ड यति जम्मा भयो उति जम्मा भयो भन्दै मलाई सुदर्शन गौतमले सुनाउनुहुन्थ्यो । रेखाले आफ्नो पकेटबाट खर्च गर्ने भन्ने नै थिएन ।’ हिम्मतवालीका हिरो सुदर्शनको साहसको सम्मान गरेर उनलाई विश्वास गरेर रकम जम्मा भएको थियो ।
चलचित्र प्रमोशनको समयमा आएका राउटेलाई हलमा घुमाउन त रेखा तयार थिइन् । तर, खाने बस्ने व्यवस्थाको विषयमा रेखालाई कुनै चासो नै नभएकाे भट्टकाे आराेप छ । ती राउटेलाई दुवै हात नभएका सुदर्शनले आफू बस्ने गरेको डेरामा नै व्यवस्थापन गरेका थिए ।
राउटे बच्चाहरूलाई भट्टले आफ्नो जिम्मामा व्यवस्थापन गरे भने प्रचारमा प्रयोग भएका राउटेलाई सुदर्शनले जिम्मा लिए । रेखा निकट एक व्यक्तिले फाउन्डेसन ‘डिसमिस’ भएको बताए । कानूनी रूपमा संस्था बन्द गरेको हो त ? भन्ने प्रश्नमा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।
यता रेखा थापाले भने पटक-पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि फोन उठाएकी छैनन् ।
सुदर्शनकाे रेखासँग सन् २०१८ बाट नै सम्पर्क नभएकाे बताए । ‘फाउन्डेसनको अवस्था के छ त ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले आफू आधिकारिक व्यक्ति नभएकाले रेखा थापासँगै कुरा गर्न आग्रह गरे । तपाईँले फन्ड उठाउन सहयोग गर्नुभएको रहेछ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने‚ ‘मैले धेरै फाउन्डेसनलाई सहयोग गरेको छु र गर्दै पनि छु, कतिले राम्रो काम गर्छन्, कतिले गर्दैनन् ।’
रेखाको टिमसँगै राउटे बस्ती डडेल्धुरा पुगेका निर्देशक श्याम भट्टराईसँग बुझ्दा उनले ‘लफडा’ मा पर्न नचाहनेको बताए । रेखाले मिडियामा नै आएर शुरु गरेको फाउन्डेसनको हालको अवस्थाबारे फेरि पनि उनी नबोलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
यसरी एकपछि अर्को फाउन्डेसन विवादमा तानिन थालेसँगै मोडल एलिजा गौतमले आफूले शुरु गरेको फाउन्डेसनको काम हाललाई स्थगित गर्ने बताएकी छन् । उनी पनि मागेर समाज सेवा गर्न तम्सिएकोमा यही घटना परिघटनाले पछि सरेकी हुन् ।
यी घटनाहरुले छिट्टै लाेकप्रिय बन्ने वा चर्चा कमाउने नाउँमा फाउन्डेशन वा समाजसेवाकाे कुरा गरिहाल्न हताराे गर्नाले आफैलाई घाटा हुने रहेछ भन्ने यी घटनाहरुले देखाएका छन् ।मकलु खबर
न्युजिल्यान्डमा ७.२ रेक्टर को भुकम्प, सुनामी आउन सक्ने चेतावनी